Ni July | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေဝေါကြီးပုံပြင် ဂျော်ဒီး (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၇ “တခါကတဲ့။ ညတညမှာ..ကောင်းကင်တခွင်လုံး.. မိုးသားတွေမည်းမှောင်ပြီး လျှပ်စီးတွေ ကလည်း ဝင်းခနဲ ဝင်းခနဲ လက်လို့တဲ့။ မိုးခြိမ်းသံတွေကလည်း တဝုန်းဝုန်း တဒိုင်းဒိုင်းဆူညံနေအောင်..အသံပေး နေသတဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ..နွားခြံတခြံကိုစောင့်ရတဲ့...
Art – Ni July နီဇူလိုင် – ပြောင်းတဲ့ ပြောင်းဖူး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၇ မိုးရွာပြီးစမို့… သစ်ပင်ပန်းမာလ်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဟာ သန့်ရှင်းစိမ်းစို လတ်ဆတ်နေတယ် ။...
ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဘာကြောင့် အလောတကြီး တည်ဆောက်ချင်နေရတာလဲ နီဇူလိုင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ဇူလိုင်(၇)ရက်..။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲက ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦ ဟောင်း နေရာမှာ...
သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ နီဇူလိုင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၇ သမဂ္ဂမဖြစ်သမျှ မိုးပျံတဲ့နတ်ဘုံနတ်နန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးပဲ..အုတ်မြစ်ချချ အဓမ္မေနသမဂ္ဂ ။ ။ နီဇူလိုင် ၆.၇.၂၀၁၇ No...
နီဇူလိုင် – ပုံပြင်အသစ်ပြောပါမေမေ
နီဇူလိုင် – ပုံပြင်အသစ်ပြောပါမေမေ (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၇ မေမေ မေမေပဲ ပြောတော့ ပုံပြင်အဆုံးမှာ လူကောင်းတွေပဲ နိုင်ရမယ်ဆို…။ မေမေ့ပုံပြင် မဆုံးသေးဘူးလား…။ ခုထိ လူဆိုးတွေက ဆိုးလို့ကောင်းတုန်း...
နီဇူလိုင် – “အို..လွမ်းဖွယ်” (မိုးမခ) မေ ၁၊ ၂၀၁၇ “… ငါက ဗိုလ်အောင်ဒင် နင်က.. ဒါကို မမြင် …”တကယ်တော့ … မိချောဟာ ဗိုလ်အောင်ဒင်ကို ဗိုလ်အောင်ဒင်လို မမြင်ခဲ့ရာက...
နီဇူလိုင် – “ငြိမ်းချမ်းရေး”
နီဇူလိုင် – “ငြိမ်းချမ်းရေး” (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၇ ရေပါတာပဲလိုချင်ခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာ ရေဘူးပေါက်ကြီးတွေနဲ့ပဲ ခပ်.. ခပ်နေခဲ့ကြရတော့ သူ့ခမျာ ခေတ်နဲ့ချီ… ခမ်းခြောက်ခဲ့..။ အခုအထိ အိတ်ပေါက်ကြီးထဲပဲ .. ကောက်.. ကောက်ထည့်ခံနေရတော့...
နီဇူလိုင် ● အရောင်နဲ့ အလှ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆ အရောင်နဲ့ အလှ လူကလေးရေ ကြည့်လေ……။ တော၊ တောင် ၊ရေ၊ မြေ။ တောဆိုလည်း၊ တောအရောင်...
နီဇူလိုင် – “၈၈၈၈”
နီဇူလိုင် – “၈၈၈၈” (မိုးမခ) သြဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၆ ငါ့ကို ပြတိုက်ထဲ အတင်းမထည့်ပါနဲ့..။ သွေးစွန်းလက်တွေကို ဖယ်ပါ..။ ငါ့ကို ပြတိုက်ထဲ အတင်းမထည့်ပါနဲ့..။ သွေးစွန်းလက်တွေနဲ့ ရင်ချင်း အတင်းအပ် မွန်းကြပ်တယ်..။...
နီဇူလိုင် – ” နှစ်လကြာရှည် ခါရာသီ ရွှေ့ပေမဲ့…” (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၆ ဇူလိုင် မိုးတွေ တဖွဲဖွဲ စွေနေတဲ့ ကလေး ဘ၀၊...
နီဇူလိုင် ● ရေမဆေးကျောက်ကလေးများ (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၆ သကာပုံမှာအုံနေတဲ့ ပရွတ်ဆိတ်ကလေးတွေလို သူတို့ဘ၀ခါးခါးတွေအတွက် သကာတစက်တလေ လျှက်မိလေမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့.. မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့..။ သူများထွေးထားတဲ့ ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့ အန်ဖတ်ဟောင်း စွန့်ပစ်မြေစာပုံတွေဟာ...
နီဇူလိုင် – ငါတို့အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ်ကြီးနဲ့
Design by Nijuly နီဇူလိုင် – ငါတို့အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ်ကြီးနဲ့ (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၆ ငါတို့အရပ်သားအစိုးရစစ်ကြီးကို အနှစ်နှစ်အလလ တောင့်တခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ငါတို့ယုံစားခဲ့တယ်..။ မီးပြတ်..ရေရှား.. အို..ဒါလေးများ…။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတရိပ်ရိပ်တက်လည်း အံကြိတ်ခံစား. အို..ဒါလေးများ..။...
နီဇူလိုင် -သတင်း ခေါင်းစဉ်များ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၆ သတင်းကမ္ဘာထဲမှာ သတင်းစာဖတ်တယ်..။ သတင်းခေါင်းစဉ်တွေက စာလုံးမည်းကြီးတွေနဲ့..။ စာလုံးမည်းကြီးတွေနဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်တွေက..။ …အစ္စလာမ္မစ်အစွန်းရောက် ….ဓားစာခံ ….ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မျက်…။ ….ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက် ….ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲ ….အဓမ္မစေတီဝင်တည်..။...
နီဇူလိုင် – “နှစ်သစ်ပွင့်”
နီဇူလိုင် – “နှစ်သစ်ပွင့်” (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၆ အို.. ဟိုသည်ကို .. ကြည့်စမ်း..။ ရွှေဝါရည်လွှမ်းခြုံ ဗုံမောင်း ရိုက်ဟည်း စောင့်ကြီးစောင့်ခဲ့ သည်နေ့ကို..။ သပြေညို ပိတောက်ရွှေ ငုခက်...
နီဇူလိုင် – “မျက်နှာညှိုးနေတဲ့အဖိုး” (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၆ မျက်နှာညှိုးနေတဲ့ အဖိုးကမေးတယ် ငြိမ်းချမ်းရေးချိုးဖြူလေး ကူပြီလားမြေး..။ ငြိမ်းချမ်းရေးသံလွင်ခက်ကလေး လန်းပြီလားမြေး..။ ငြိမ်းချမ်းရေးတေးသံတွေ ညံစီပြီလားမြေး .. တဲ့။ မြေးက..ဟိုဘက်သည်ဘက် ခေါင်းကလေးအသာငဲ့ကြည့်ရင်း.....
နီဇူလိုင် – “ထုံကူးပွဲ”
နီဇူလိုင် – “ထုံကူးပွဲ” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ (၁) နှင်းနဲ့ မြူ. မသဲကွဲတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ.. ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ.. ရွာလေးတရွာမှာ ကျောင်းသားရဲဘော် ကိုအောင်ကျော်ကို မွေးဖွါးခဲ့။ နောက် …ကိုးဆယ့်ကိုးနှစ် အကြာ...
နီဇူလိုင် – “ဒီဇင်ဘာ”
နီဇူလိုင် – “ဒီဇင်ဘာ“ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ မင့် နှင်းထုရဲ့  သိပ်သည်းဆထဲမှာ ချစ်သူချင်းတွေ ထွေးပါစေ ချစ်သူချင်းတွေ နွေးပါစေ..။ ဒီဇင်ဘာ မင့် နှစ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်သက်နဲ့အတူ အေးစက်မာကျော…...